Real Madrid Oo Tixgalineysa Inay U Dhaqaaqdo Xiddiga Paris Saint Germain Ee Presnel Kimpembe
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo Tixgalineysa inay u dhaqaaqdo xiddiga Paris Saint Germain ee Presnel Kimpembe
October 12, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo daafaca dambeedka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan.
26 jirkaan ayaa u saftay PSG 192 kulan tan iyo markii uu yimid 2014, halka uu mar kale muhim u ahaa kooxda reer France xilli ciyaareedkan.
Chelsea ayaa la rumeysan yahay inay ku fikireen inay u dhaqaaqaan xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska intii lagu jiray xagaagii hore laakiin Blues ayaa bedelkeeda diirada saartay Jules Kounde , kaasoo ugu dambeyntii sii joogay Sevilla.
Real Madrid ayaa la filayaa inay la soo saxiixato daafac dhexe oo cusub sannadka soo socda, iyadoo ay arkeen labada ciyaaryahan ee Sergio Ramos iyo Raphael Varane oo kooxda ka tagay.
Sida laga soo xigtay Defensa Central , Kimpembe ayaa u soo ifbaxay bartilmaameedka kooxda Carlo Ancelotti , kuwaas oo miisaamaya dalab lacageed oo weyn oo daafaca ah ka hor ololaha 2022-23.
Ninka reer France ayaa weli waxaa u harsan saddex sano si uu u sii wado qandaraaskiisa kooxda Mauricio Pochettino .